Wararka Maanta: Sabti, Apr 16, 2022-Xildhibaan Xiddig: Xilka aan u tartamayo ee guddoomiyaha barlamaanku, waa xilka ugu sarreysa dalka
Wararka Maanta- Sabti, Apr 16, 2022
Xildhibaan Xiddig: Xilka aan u tartamayo ee guddoomiyaha barlamaanku, waa xilka ugu sarreysa dalka
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig oo katirsan barlamaanka Soomaaliya ayaa markii labaad iskusoo sharraxay xilka guddoomiyaha golaha shacabka, isagoo u arka fursad uu kusoo bixi karo.
Xildhibaan Xidddig ayaa sheegay in jagada guddoomiyaha barlamaanku ay tahay jagada ugu sarreysa daka. Wuxuuna sheegay sababta uu isugusoo sharraxay inay tahay inuu ummadda tuso inaanu jirin kursi reer kaliya loo asteeyay.
“Waxaan rabnaa inaan dadka barno guddoomiyaha barlamaanku inuu yahay xubinta ugu sarreysa dalka ama xubinta labaad. Waxaa laga hadlayaa Prime minister. Soo ma ahan midkii todobada daqiiqo lagu ceyriyay,” ayuu yiri xildhibaan Xiddig.
Xiddig waxa uu sheegay inuu kalsooni ballaaran ka haysto beesha uu kasoo jeedo. Wuxuu kaloo beeniyay in is sharraxaadiisa ay tahay mid siyaasadeed oo loo adeegsanayo in lagu dhabar jebiyo siyaasiyiinta beesha uu kasoo jeeda, kuwaas oo u sharraxan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
“Waxaa loo baahan yahay horumar iyo in laga gudbo saddex dhardhaar oo lixdamaadkii la dhigay. Waayo waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo xaq uleh inay u tartamaan jagooyinka ugu sarreeya ee dalka,” ayuu hadalkiisa raaciyay xildhiban Xiddig.
Xildhibaan Xiddig ayaa sannadkii 2016 u tartamay jagada guddoomiyaha barlamaanka, wuxuuna helay 97 cod, waxaana kaga guulaystay Maxamed Cismaan Jawaari. Wuxuu hadda aamisan yahay inuu haysto fursad ka fiican midii sannadkii 2016.
Xukuumada Somaliland oo ka hadashay suxufiyiinta tirrada badan ee xidhan
4/16/2022 4:01 PM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Xukuumada Somaliland, ayaa sheegtay in sharciga lala tiigsanayo wariyayaashii tabiyay dhacdadii Jeelka Wayn ee Hargaysa, iyadoo dhinaca kale sheegtay in ay ka xuntahay xadhiga suxufiyiinta.
Garyaqaanka guud ee dalka oo maxkamadda sare ugu baaqay inay diido dacwadda Fahad Yaasiin
4/16/2022 12:43 PM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Xafiiska Garyaqaanka guud ee Soomaaliya ayaa maxkamadda sare ee dalka ka codsaday inay diido dacwadda lagasoo gudbiyay go'aanka guddiga doorashadu ku hakiyay kursiga Fahad Yaasiin.
Taliyaha booliska Somaliland oo si adag ugu hanjabay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan Golaha Wakiillada
4/16/2022 12:12 PM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa maanta sheegay in hanjabaad iyo baahdil uu kala kulmay taliyaha booliska Somaliland, Maxamed Aadan Saqadhi.
Guddiyada Doorashada Guddoonadda Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare oo la magacaabay
4/16/2022 8:04 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Guddoomiyaha kumeel gaarka ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdisalaan Axmed Dhabanacad ayaa magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka Golaha Shacabka oo ka kooban 10 xubnood, kadib markii Maanta Golaha ay yeesheen kulankoodii ugu horeeyay.
Guddoomiyaha KMG ah ee barlamaanka Soomaaliya oo codsaday in si degdeg ah loosoo gabagabeeyo doorashada guddoonka barlamaanka
4/16/2022 6:28 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha shacabka Soomaaliya, Cabdisalaan Xaaji Axmed (Dhabancad) ayaa ka codsaday xidlhibaannada in la dadajiyo doorashada guddoonka barlamaanka, si uu dalka uga baxo sharciyad la’aanta hay’addaha dastuuriga ah.
Kalkaaliso Soomaali ah oo labo sano gudaheed ku noqotay milyaneer: Sheekada gabadha uu dhalay Feysal Cali Waraabe
4/16/2022 5:19 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Labo sannadood ka hor markii Faadumo Cali ay sheegtay inay iska dhaaftay shaqadii kalkaalisannimada oo ay furaneyso ganacsi ay iyadu leedahay, dad badan ayaa ku tilmaamay in ay waalantahay, balse shirkadeeda hadda waxay haysataa lacag dhan malaayiin Yuuro.
Kulankii ugu horeeyay ee Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad oo goordhaw Muqdisho ka furmay
4/16/2022 5:16 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Waxaa goordhaw si rasmi ah u furmay kulankii ugu horeeyay ee Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ee dalka Soomaaliya, waxaana kulanka shir guddoominaya guddoomiyaha KMG ah ee Golaha Shacabka.
Al-shabaab oo sheegatay iney la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose
4/16/2022 4:15 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Wararka ka imaanaya deegaanka lagu magacaabo Warmaxan oo ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ay dagaal kula wareegeen deegaankaasi.
Midowga Afrika oo la filayo in wakiil cusub usoo magacaabo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya kadib eryidii Madeira
4/16/2022 3:12 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa la filayaa in uu yeesho hogaamiye cusub maalmaha soo socda kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo madaxii hore howlgalka.
Doorashada kursi tartankiisa adag yahay oo Maanta ka dhaceysa magaalada Jowhar
4/16/2022 2:07 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Guddiga hirgelinta doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa Maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe iney ku qabtaan doorashada hal kursi oo sumadiisu tahay HOP 106, kaasoo ay ku tartami doonaan ilaa lix Musharax.
Soomaaliya oo loo doortay guddoomiyaha ururka horumarinta beeraha ee jaamacada Carabta
4/16/2022 1:56 AM EST
Sabti, April, 16, 2022 (HOL) - Soomaaliya ayaa loo doortay in ay noqoto Guddoomiyaha Ururka Horumarinta Beeraha Carabta ee Jaamacadda Carabta labada sano ee soo socota.
Fifteen journalists detained for covering prison fight in Somaliland -CPJ
4/16/2022 3:10 AM EST
Authorities in the breakaway region of Somaliland should unconditionally release without charge 13 journalists detained since April 13 and should not pursue any charges against two others who were detained and later released, the Committee to Protect Journalists said Friday.
TİKA Built a health center in Somalia -TİKA
4/16/2022 3:01 AM EST
Somalia may take many years to clear land mines placed to fight Al-Shabaab -The East African
4/16/2022 2:40 AM EST
Somalia may take many years to clear land mines that were placed to fight against Al-Shabaab militants amid decades of insecurity.
Rep. Ilhan Omar: It would be 'staggeringly hypocritical' for US to support a war crimes against Putin without joining the ICC -Business Insider
4/16/2022 2:36 AM EST
Rep. Ilhan Omar said it would be hypocritical for the US to support a war crimes investigation by the International Criminal Court without moving to become a member.
UMF announces Dhalac, mayor of South Portland and first Somali-born female mayor in the U.S., as 2022 Commencement speaker -Bangor Daily News
4/16/2022 2:29 AM EST
FARMINGTON – The University of Maine at Farmington is honored to announce that Deqa Dhalac, community activist, mayor of South Portland and first Somali-born female mayor in the U.S., will be the Commencement Speaker for the UMF Class of 2022.
Impact of Ukraine draws away focus on food crisis in Somalia – WFP -Xinhua
4/16/2022 1:30 AM EST
Gen. Mahad Abdirahman Adan resigns as Correctional Service Chief -HOL
4/16/2022 1:20 AM EST
Mogadishu (HOL) - The Chief of the Somali Correctional Forces, Gen. Mahad Abdirahman Adan, announced said he had resigned on Friday after joining the Lower House of the Parliament.